Ubuntu Bamba i-OTA-11 iza nolawulo lwetekisi yendalo ngakumbi | Ubunlog
Ubuntu Touch's OTA-11 ifika nolawulo lwetekisi yendalo ngakumbi
Ngaphantsi kweveki ephelileyo, iCanonical ikhuphe Ubuntu 19.10, inguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza kwedesktop eyayiza phantsi kwegama lekhowudi uEoan Ermine. Nangona besikhankanyile "kwidesktop", ngesele siyishiyile "kwinkqubo yokusebenza", kuba kudala ishiye iprojekthi yoBuntu. Kodwa uhlobo lokuchukumisa Ubuntu luqhubeka kunye nee-UBports Usungule kwimizuzu embalwa edlulileyo I-OTA-11 yesistim yokusebenza yeselfowuni eyayichola xa inkampani eqhuba uMark Shuttleworth igqibe ekubeni iyibeke ecaleni.
Olu khululo lutsha luza kwiiveki nje ezimbini emva kwe ukumiliselwa kwenguqulo yolingo kwaye kwiinyanga ezimbini emva kokumiliselwa kwe I-OTA-10. Ekuqaleni, i-UBports yayijolise ukuba oku kube kukhutshwa okuncinci, kubandakanya kuphela okungakulungelanga i-OTA-10 ka-Agasti, kodwa ekugqibeleni uhlaziyo alukho mncinci njengoko bekulindelwe. Apha ngezantsi unoluhlu lweendaba ezibalaseleyo.
Amagqabantshintshi e-Ubuntu Touch i-OTA-11
Ikhibhodi ekrelekrele. Ngale nto ikhutshiweyo, indlela entsha yokuhlela isicatshulwa kwibhodi yezitshixo iyafumaneka, into abayibize ngokuba yiMisebenzi yokuBhala ePhambili. Ngoku ungahamba ujikeleze isicatshulwa esichwetheziweyo sokwenza kwakhona kwaye uhlengahlengise, unokwenza uxande ngaphezulu kokubhaliweyo kwaye uwusebenzise ukusika, ukukopa okanye ukuncamathisela, konke kunxibelelwano olufanayo. Utshintsho lunokwenziwa kwixesha elizayo ukunceda abasebenzisi bafumane eli nqaku.
Ukuphuculwa kwesikhangeli sewebhu, ezibandakanya iilayini ezingama-4.000 zekhowudi ukubandakanya imodeli yeeMvume zeDomain. Oku kuyasivumela ukuba sigcine inqanaba lokusondeza kwiphepha ngalinye, vumela kube kanye okanye ukufikelela rhoqo kwindawo yewebhu, faka amaphepha ewebhu kuluhlu olumnyama kwaye ungeze inkxaso yeekhonkco ezinje Inombolo yomnxeba: //.
Cofa izaziso ngaphandle kokuba une-akhawunti enye Ubuntu.
Inkxaso yezixhobo ezitsha, ezinjengezo zaqala zaphuma nge-Android 7.1.
Ukuphuculwa kwenkxaso yeaudio, ngakumbi kwiminxeba.
Umcimbi ohleliweyo kwi-Nexus 5 enokubangela ukuba iBluetooth kunye neWi-Fi zixhomekeke amaxesha ngamaxesha zisebenzisa i-CPU kunye nebhetri.
Ukuphuculwa kwemiyalezo ye-MMS.
I-OTA-11 ngoku iyafumaneka kuzo zonke izixhobo ezixhaswayo ze-Ubuntu ukusuka kwicandelo lokuhlaziya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Touch's OTA-11 ifika nolawulo lwetekisi yendalo ngakumbi
Ngaba uCooke ubhengeze umhlala phantsi kwi-Canonical kwaye endaweni yakhe nguMartin Wimpress
Inguqulelo entsha yeGoogle Chrome 78 isikhangeli sele ikhutshiwe